Qiyaasta Leger: Codka Macaamiisha (VoC) Warbixinta Waxqabadka | Martech Zone
Qiyaasta Leger waxay bixisaa barxad si ay uga caawiso shirkaddaada faham wanaagsan oo ku saabsan sida khibradaada macaamiisha ay u wado qanacsanaanta, daacadnimada iyo faa'iidada shirkaddaada oo dhan.
Barmaamijka Codka Macaamiisha (VoC) wuxuu ku siinayaa agabyada lagama maarmaanka u ah soo qabashada jawaab celinta macaamiisha sifooyinka soo socda:
Warcelinta Macmiilaha - Ku martiqaad jawaab celinta macaamiisha kuna soo qaado moobiilka, websaydhka, SMS, iyo telefoonka.
Warbixinta iyo Falanqaynta - U gudbi fikradaha dadka saxda ah, waqtiga saxda ah qaab ay ku dhaqmi karaan. Fahamka jawaab celinta macaamiisha ayaa kaa caawinaysa inaad mudnaanta siiso ficillada iyo inaad hagaajiso waxqabadka hawlgalka iyo gunta hoose.
Soo Celinta Macaamiisha - Ku guuleysta macaamiisha aan ku qanacsaneyn waqtiga-dhabta ah, ee kiciyey digniinta. Maareyn oo xalliso arrimahooda, la soco kiisaskooda, oo u beddelo danjireyaal xamaasad leh.
U Doodista Bulshada - U rog rogo jawaab celin togan u doodista warbaahinta bulshada adoo dhiirigelinaya talooyinka sumadaha. Kordhi warbaahintaada bulshada ROI, kor u qaad ereyga-afka, abuur fursado suuqgeyn bulsho oo cusub, iyo kobcinta dakhliga.
Falanqaynta qoraalka - Sharax badan ka bixi khibradahaaga iyo dareenkaaga adoo falanqeynaya faallooyinkooda dhammaadka furan si dhakhso leh oo fudud iyadoo loo marayo Nidaamka Luuqadda Dabiiciga ah.
Adeegyada dhammaadka-ilaa-dhamaadka - Leger Metrics ayaa adiga kula shaqeynaya si aad u qaabeyso, u qaabeyso, u dirto, una maamusho barnaamijkaaga jawaab celinta ee codka Macaamiisha (VoC). Meel qoto dheer leh horumarsan Analytics iyo suuq geynta adeegyada cilmi baarista.
Tags: falanqaynta macaamiishajawaab celinta macaamiishasoo kabashada macaamiishawarbixinta macaamiishaqiyaasta legerfarsamaynta luqadda dabiiciga ahnlpu doodista bulshadafalanqaynta qoraalkavoccodka macaamilka